तीन जनालाई मात्रै थाहा थियो कर्णको रहस्य ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
तीन जनालाई मात्रै थाहा थियो कर्णको रहस्य !
मेरो लाइफस्टाइल || 14 March, 2021
महाभारतमा कुन्ती पुत्र कर्णलाई अधिरथ र राधाले पालनपोषण गरेका थिए । गङ्गा नदीमा बगिरहेका बालकलाई उनीहरूले आफ्नो घर लगेका थिए । अधिरथकी श्रीमतीको नाम राधा थियो । उनले कर्णलाई आफ्नै पुत्रवत व्यवहार गरेर पालनपोषण गरेकी थिइन् ।
कर्णको कान निकै सुन्दर थियो, त्यसैले उनको नाम कर्ण राखिएको थियो । अधि रथ निःसन्तान थिए । अधिरथ र राधा एक सूत थिए । त्यसैले कर्णलाई पछि सूत पुत्र र राधे पुत्रका नामले बोलाउन थालियो ।
कर्णलाई आफ्नो वास्तविक आमा को हुन् भन्ने थाहा थिएन । तर उनले आफ्नो पिता भने सूर्यदेव रहेको थाहा पाइसकेका थिए ।
भीष्मलाई कर्ण, पाण्डवकै भाइ भएको थाहा थियो तर उनले कहिल्यै कर्णलाई यो सत्य पनि सुनाएनन् । यो कुरा भीष्मले मात्रै होइन, भगवान् श्रीकृष्णले पनि कर्णलाई भनेका थिएनन् । माता कुन्तीले पनि यो कुरा कर्णलाई भनेकी थिइनन् ।
जब कौरव र पाण्डवबिचमा युद्ध हुने निश्चित भयो तब, कुन्तीले यो कुरा कर्णलाई भनेकी थिइन्, साथै कृष्णले पनि पाण्डवका लागि पाँच गाउँ माग्न जाँदा कर्णलाई कुन्ती पुत्र भनेका थिए । कर्णले आफ्नी आमाको वचनले गर्दा अर्जुन बाहेक अन्य भाईहरुविरुद्ध शस्त्र नउठाउने प्रण गरेका थिए । जब कर्णको मृत्युपछि सबैले कर्ण कुन्ती पुत्र भएको थाहा पाए तब दुर्योधनसहित सबै जना अचम्मित बनेका थिए ।